Cunsuriyada Ciidamada Cadaanka ah ee Dalka Maraykanka iyo Tirada 11 Dil Ee Sababay Mudaharaado. |
Cunsuriyada Ciidamada Cadaanka ah ee Dalka Maraykanka iyo Tirada 11 Dil Ee Sababay Mudaharaado.
Washinton(GNN):-Dilka loo geystay nin madow ahaa ee aan hubeysneyn ee booliska xireen kaddibna mid ka mid askarti booliska uu jilibka qoorta ka saaray sidaana ku dhintay, ayaa cusbooneysiiyey carada ka dhalatay dhibaatada ay ay booliska Mareykanka kula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay ee dalkaas ku nool.
George Floyd, oo ay da’diisu ahayd 46 sano ayaa waardiye ka ahaa mid ka mid ah maqaayadaha ku yaalla Minneapolis.
Muuqaal 10 daqiiqo soconayay ayuu ka duubay qof dhacdadaasi goob joog u ahaa kaas oo uu ka dhex muuqdo Floyd oo ay nafta hayso oo booliska caddaanka ah ku leh “waan neefsan la’ahay”.
Dhacdada ayaa ku soo beegmeysa isla-maalinti ay haweeney caddaan ah oo ku nool New York ay booliska wacday una sheegtay nin madow ah inuu u hanjabay kaddib marki uu ku yiri eeygaaga naga xiro.
2019-kii oo keli ah boolisku waxay dileen dad ka badan 1000 qof
Dilka Floyd loo geystay waxay sii murjisay xaaladda iyadoo ay jiraan dilal kale oo ay Booliska ka geystaan dalka Mareykanka.
Sawir muujinaya askari caddaan ah oo Floyd qoorta kaga taagan
Sida ay sheegeyso xog lagu baahiyey wargeyska Washington Post, boolisku waxay sannadki 2019-kii dileen illaa 1014 qof, iyada oo ay warbixintu sheegtay dadka ugu badan ee dilka loo geystay iney yihiin kuwa madowga ee Mareykanka ku nool.
Daraasad ay Hay’ad kale sameysayna waxaa lagu sheegay dadka madowga iney seddex jibbaar ka badan yihiin dadka caddaanka ee la dilo.
Dilalka naxariis darrada ah oo ay booliska u geystaan dadka aan caddaanka ahayn waxaa ka dhashay falcelinno ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa #BlackLivesMatter. Waxaana olole rasmi ah billaabay gabadha heesta ee caanka ah Beyonce iyo xiddiga kubadda Kolayga Lebron James.
Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii faraha badnaa ee ay booliska dileen ee sababay iney dhacaan mudaharaadyo waa wayn oo lagu diidan yahay awoodda xad-dhaafka ah ee askarta u adeegsadaan dadka madow.
Trayvon Martin, 26-kii Fabraayo 2012
Trayvon Martin, wuxuu ahaa arday madow ah oo ay da’diisu ahayd 17 sano jir, waxaana Sanford ee gobolka Florida ku toogtay George Zimmerman.
Martin xilliga uu askariga dilka u geystay wuxuu u socday qaraabadiisa inuu booqdo, waxaa dilka arkayey qof ku dhawaa meel aan ka fogeyn halka uu ku dhintay.
2013-kii, garsooraha dacwadda gacanta ku hayey ayaa Zimmerman ku xukumay inuusan dambi lahayn, sharciga Mareykanka ayaana u oggolaaday inuu yirahdo Trayvon wuxuu u toogtay si uu naftiisa u difaaco, balse saaxibbadii iyo qoyskiisa waxay rumeysan yihiin in dil bareer ah loo geystay.
Dilka noocaasi waxaa ka abuurmay dhaqdhaqaaqa aadka u weyn ee #BlackLivesMatter, iyo dibadbaxyo.
Eric Garner, 17-kii July 2014
Garner ayaa lagu dilay New York kaddib markii looga shakiyey inuu si sharci darro uu u iibiyo sigaar furfur ah oo baakad aan ku xirneen.
Muuqaaal laga duubay dilkaas ayaa muujinaya Garner oo marar badan ooynaya oo leh “waa neefsan la’ahay”, askari caddaan ahna uu qoorta Garner ceeji ama daro ku hayo.
Garsooraha sare ee gobolka oo diiday inuu dacwad ku soo oogo askariga dilka geystay ee Pentaleo, waxaa ka dhashay mudaharaadyo ballaadhan oo looga soo horjeeday dhacdadaas.
Pentaleo waaxda booliska New York ayaa laga eryey shan sana kaddib marki uu dilka geystay.
Michael Brown, 9-kii August 2014
Dhaqdhaqaaqa #BlackLivesMatter wuxuu caalamka soo jiitay marki Michael Brown oo 18 sano jir madow ahaa kaas oo uu dilay askari boolis caddaan ah oo lagu magacaabay Darren Wilson.
Dilkaas ka dhacay Fergusen, ee gobolka Missouri, waxaa ka dhashay mudaharaadyo ballaadhan oo sababay inuu hal qof dhinto qaar kalana ay dhaawacmaan, boqollaal kalena xabsiga ayaa loo taxaabay.
Mudaharaadyo hor leh ayaa bisha November dib u billowday kaddib marki uu garsooraha ku dhawaaqay in Wilson oo ka rusqeystay booliska inuusan dambiila ahayn.
Walter Scott, 4-tii April 2015
Walter Scott oo ahaa nin madow oo 50 sano jir ahaa, waxaa seddex xabbadood dhabarka kaga dhuftay nin caddaan ah oo lagu magacaabo Michael Slagger. Arrintaas waxay ka dhacday North Chaleston,ee gobolka South Carilina.
Sarkaalkaas wuxuu joojiyey gaadhigiisa Scott isaga oo arkay nal jaban. Scott-na wuxuu xilligaasi ku socday inuu soo bixiyo lacago uu carruurta ku caawinayey oo uu la dib dhacay.
Slagger waxaa lagu xukumay 20 sano oo xarig ah sannadka marka uu ahaa 2017-ka, halka ay qoyska Scott maamulka North Charleston ay ka heleen magdhaw lacageed oo dhan $6.5 malyan oo doolar.
Freddie Gray, 12-kii April 2015
Hal Toddobaad markii ay ka soo wareegtay dilkii loo geystay Walter Scott, arrin kale oo lala yaabay ayaa ka dhacday Baltimore, Maryland.
Fred Gray oo ay da’diisu 25 sano jir ahayd waxaa loo xiray inuu hub sharci darro ah sitay kaddibna uu booliska jeebkiisa ka helay middi.
Muuqaal qof dhacdadaasi goob joog u ahaa uu duubay ayaa muujinaya Gray oo saaran gaari ay boolisku leeyihiin. Saacad yar kaddibna waxaa la geeyey Isbitaalka si looga daweeyo dhaawac culus oo dhabarka ka soo gaaray.
Wuxuuna Gray geeriyooday toddobaad kaddib, waxaana geeridiisa ka dhalatay mudaharaadyo ballaadhan oo sababay iney 20 askari dhaawacmaan.
Seddex ka mid ah lixdi askari ee dilkiisa loo haystay ayey maxkamadda dambi ku weysay waana la sii daayey, halka seddexda kalana aan weligood maxkamad la geynin.
Sandra Bland, 13-kii July 2015
Bland oo 28 sanjir ahayd waxaa joojiyey booliska waddooyinka gaaf wareega ee Texas waxaana loo haystay xoogaha khalad dhinac waddada oo ay sameysay.
Xilliga Bland lala hadlayey sigaar ayaa u shidnaa, waxayna booliska weydiiyeen iney bakhtiiso sigaarka balse wey ka diidday. Bland booliska xabsiga ayey u taxaabeen waxaana lagu soo oogay dacwad ah iney booliska cayday iyada oo diidday iney fuliso amarka ayna sameyso wixi la weydiiyey.
Seddex maalmood kaddib Bland xabsiga ayey isku dishay. Balse Bland gacanta booliska kuma dhiman, hase yeeshee geerideeda cara hor leh ayey Mareykanka oo dhan ka abuurtay.
Kiiskeeda waxaa ka dhashay dhaqdhaqaaq looga magac daray #SayHerName, oo bulshada looga wacyigelinayo xadgudubyada ay booliska caddaanka ah u geystaan dadka madowga ah.
Bland waxaa sida oo kale looga magac daray filim dokumantari ah oo 2018-kii lagu baahiyey warbaahinta American cable network.
Philando Castile, 6-dii July 2016
Castile waxaa Minnesota ku toogtay askari kuwa waddooyinka ilaaliya ah oo lagu magacaabo Jeronimo Yanez.
Dhacdadanna waxaa si toos ah baraha bulshada uga tabisay saaxibaddii.
Yanez waxaa lagu soo oogay dacwad ah fal dil ee heerkiisa labaad iyo hubka oo uu sharciga siiyey si khatar ah u adeegsaday, hase yeeshee wax ka yar sannad waxaa Yanex bari yeelay garsoore maxkamaddeed.
Botham Jean, 6-dii September 2018
Jean oo 26 sano jir ahaa, waxaa lagu dilay hoygiisa iyada oo ay dilka u geysatay haweeney askariyad ahayd oo aan shaqa ku jirin maalintaa oo lagu magacaabo Amber Guyger.
Haweeneydaas Askariga ahayd waxay sheegtay iney si khalad ah ku gashay guriga ninka ay disahay oo ay moodeysay in uu gurigeeda yahay, kaddibna ay Jean oo aan hubeysneyn oo gurigiisa iska fadhiya toogatay iyada oo u haysatay inuu yahay tuug gurigeeda u soo dhacay.
Sannad kaddib Guyger waxaa lagu xukumay 10 san oo xabsi ah.
Atatiana Jefferson, 13-kii October 2019
Jefferson oo ay da’deedu 25 sano jir ahayd waxay baraneysay dhakhtarnimo waxaana lagu dilay qolkeeda hurdada, waxaa dilay askari lagu magacaabo Aaron Dean.
Qof deris la ah ayaa booliska ku wargeliyey in albaabka guriga Jefferson uu furan yahay, kaddibna askariga ayaa Jefferson oo sariirteed kua jiifta ka toogtay daaqadda qolkeeda.
Askarigaasi waxaa lagu soo oogay dacwad balse weli maxkamaddu xukun kuma aysan ridin.
Breonna Taylor, 13-kii March 2020
Breonna Taylor oo 26 sano jir ah ahayd kana mid ahayd xirfadlayaasha caafimaadka ee xaladaha degdegga ah, ayuu askari boolis ah gurigeeda ugu galay kaddibna 8 xabbadood ku dhuftay, arrintaas waxay ka dhacday Louisiville, ee gobolka Kantuccky.
Wuxuu askerigaas sheegay inuu gabadhan u dilay warqad maxkamadeed oo uu haystay inuu ka baaro maandooriyaha oo looga shakiyey in ay haysatay, balse markii gabadha gurigeeda la baaray waxaa la sheegayey in laga waayey daroogo.
Qoyska Taylor waxay sheegeen iney aaminsan yihiin inuu askariga uusan u soconin iyada ama seygeeda balse uu raadinayay qof falkaasi looga shakisan yahay oo dhismahaas aan ku nooleeyn.
Booliska Louisville waxay sheegeen iney rasaas ku fureen kaddib markii uu hal askari howl galkaasi kaga dhaawacmay.